पुल सञ्चालनमा नआउँदै मर्मत शुरू | गृहपृष्ठ
Home विकास पुल सञ्चालनमा नआउँदै मर्मत शुरू
पर्वत (अस) । पर्वतको एक झोलुंगे पुल निर्माणमा लापरबाही भएको पाइएको छ । कुश्मा–ज्ञादी झोलुंगे पुल निर्माणको क्रममा भू–सतह नमिलाई लठ्ठा तान्दा पुल ढल्किएको हो । निर्माण सकेर आवतजावतका लागि खुला गर्ने तयारी भइरहँदा पुल कोल्टे परेपछि मर्मत गर्न थालिएको छ ।
‘दायाँतर्फ ढल्किएपछि लठ्ठा तन्काएर एकातिरको सतह अग्लो बनाउन थालेका छौं,’ पुल निर्माण समितिका अध्यक्ष नारायण अधिकारीले भने, ‘प्राविधिकको लापरबाहीले यस्तो भयो ।’ दायाँतिर होचो र बायाँतिर अग्लो सतहमा लठ्ठा राखिएकाले पुल ढल्किएको उनले बताए ।
पुल निर्माणमा रू. २ करोड खर्च भइसकेको छ । मोदी खोलामाथि निर्मित उक्त पुल ३ सय ५९ मिटर लम्बाइ र १ सय २८ मिटर अग्लो छ । झोलुंगे पुलले पर्वतको सदरमुकाम कुश्मा बजारसँगै पिपलटारी, ठूलीपोखरी, कार्कीनेटा, थापाठाना, शंकरपोखरी लगायत ठाउँहरू जोड्छ ।
प्राविधिक इन्जिनीयरमार्फत सबै संरचना जाँचबुझ गरी पुललाई भरपर्दो बनाउने काम भइरहेको समितिले बताएको छ । पुल मर्मत गर्न अझै केही दिन लाग्ने बताइएको छ । अहिले दुवै तर्फबाट आवतजावत रोकेर मर्मत गरिएको छ ।
पुल निर्माणको क्रममा प्राविधिक पक्षमा ध्यान नपुग्दा समस्या देखिएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । ‘पुल बनाउँदा यसको प्राविधिक पक्षमा कमजोरी भएको देखिन्छ,’ स्थानीय रामशर्मा पौडेलले भने । पर्वतमा यसअघि यही प्रकृतिका चार पुल निर्माण भइसकेका छन् ।
तस्वीर : सरकारले हटाएँ भनेको तुइन फेरि कहाँबाट देखियो ?
ठेकेदार भागेपछि झोलुंगे पुल अलपत्र
जीर्ण राजमार्ग मर्मत गरिँदै